Bazohlolwa amanga abadlali beNFD | News24
Bazohlolwa amanga abadlali beNFD
Durban - Selubheke emaphethelweni uphenyo olwenziwa yisikhulu seReal Kings United FC esidinwe sathelwa ngezibonkolo ezaso zihlulwa ngembudlu yamagoli yikilabhu ebizama ukuvika izembe kodwa layigenca.
ILANGA like labika phambilini ukuthi uBongani Ngidi ongumnikazi weKings uzokwenza uphenyo lwangaphakathi ngenxa yokusola umkhonyovu emdlalweni lapho ezakhe zinenebulwe khona yiMagesi FC ngo-6-0 koweNational First Division (NFD) ngenyanga edlule e-Old Peter Mokaba Stadium, ePolokwane.
Leli phephandaba lithole ngemithombo yalo engaphakathi kwiKings ukuthi uNgidi usebheke ekuluphothuleni lolu phenyo. Kuthiwa kubadlali abasolwayo ube nenguyazana nabo ngamunye ebaphenya ehlanganisa nolwazi aluthola ophenyweni alwenze ngaphandle.
Kuthiwa osekusele manje wukuthi bafakwe emshinini ohlola umuntu ukuthi ukhuluma iqiniso noma amanga yini bese emuva kwalokho luyaphothulwa uphenyo.
"Uphenyo seluyaphela manje, kunabadlali abayisi-6 okuzokuthi uma ikilabhu ivula bafakwe emshinini ohlola umuntu ukuthi uqamba amanga noma usho iqiniso yini. Yilapho kuzocaca khona-ke ngekusasa lalaba badlali. UNgidi yamcika into eyenzeka kulo mdlalo ngoba idicilele isithunzi sakhe uqobo nesekilabhu.
OLUNYE UDABA:Kuphenywa izikhulu zamakilabhu ePSL ngenkohlakalo
"Phela le nto ibisikhulunywa emazingeni aphezulu kwiPSL (Premier Soccer League) nakhona kusolwa ugcobho. Ngeke akuthole ukuphumula engawutholile umnyombo wayo yonke le nto," kusho umthombo waleli phephandaba oncikene kakhulu noNgidi.
Leli phephandaba lishayela uNgidi ngalolu daba, ukuqinisekisile ukuthi konke elimbuze kona kuyiqiniso kodwa wangafuna ukwanda ngamaningi.
"Ngingakuqinisekisa ukuthi uphenyo sesiyaluphothula kodwa-ke kangifuni ukwanda ngamaningi ngoba kangithandi luphazamiseke. Sesilinde abadlali babuye bese senza lokho okufanele sikwenze bese sisonga yonke into ngalolu daba. Engifuna ukukubeka kucace wukuthi kangilwi namuntu, phela laba badlali bafana nezingane zami, ukuthi nje ngifuna ukuthola iqiniso ngoba ngiphoxekile ngokwenzeka," kusho uNgidi.